Midab qaabaynta astaanta | Abuurista khadka tooska ah
Curinta halabuurku waxay noqon kartaa sameeya dhammaan noocyada qorshayaasha garaafka, Khadadka duqeynta, gooladaha loo yaqaan 'bezier curves' ama burushka biriijka si loo abuuro qaababka kala duwan ee muujinta.
Laakiin waxa ugu horreeya ee soo jiita dareenka maskaxdeenna ama dareenkeennu waa midabada iyo isticmaal kuwan saamigooda loogu talagalay. Naqshadeeye qaabeed waa inuu si sax ah u ogaadaa macnaha mid kasta iyo xiriirka uu la leeyahay dadka kale si loo siiyo taabashada ugu dambeysa shaqadiisa, ha noqoto halabuurka ama farsamada la adeegsaday, ama xaaladdan abuurista astaan.
Haddii aan u tagno isticmaalka midabka noocyada caanka ah, astaamahooda, waxaan si dhakhso leh u aragnaa ururo kala duwan iyo tusaalooyin adeegsiga midabbo kala duwan. Ferrari oo leh midabkiisa casaanka ayaa ah tusaalaha ugu cad ee xamaasadda iyo xanaaqa, astaamaha astaanta Talyaani. Waa in aynaan iloobin madow iyo caddaan, maadaama aan iyaga ognahay xirtaan inta badan waxay xoojiyaan walxaha qaarkood oo ah astaan.
waxay tilmaamaysaa xamaasad, xoog, khatar, khatar ama gardaro, ama xitaa xanaaq. Ma noqon doonto wax iska yimid in lagu arko noocyo kala duwan oo cunto ah sida makhaayadaha cuntada lagu cuno. Xiddiga Foster's Hollywod ama casaanka ka muuqda meel kasta oo ka mid ah Coca-Cola waa tusaalooyin kale oo cad, marka laga reebo midka aan ka siiyay Ferrari.
Midabka ah ikhtiraac iyo fikir casri ah, laakiin taasi marwalba way igu celisaa, ugu yaraan, boosta filimka ee A Clockwork Orange. Filim ujeedkiisu yahay rabshad xoog leh laakiin taasi dhammaantood waxay ahayd wicitaan aan ixtiraam lahayn oo loogu talagalay casriyeynta qaybaha kala duwan ee filimka Kubrick ku jiray. Aynu xusuusano naadiga ay kooxda hoggaanka u tahay ay ka cabayaan xoogaa cabitaanno ah. Liinta sidoo kale waxay noo horseedaa dhalinyaro, baashaal iyo isu soo dhawaansho.
Midab kale oo kiciya rabitaanka cuntada, laakiin macno kala duwan leh, maraya qadhaadhka liinta, illaa codadka duller ee dayrta ama waxa qorraxdu uga dhigan tahay kuleylka la socda. Waxaan xiiseyneynaa inaan ku arki karno midabkan shirkadaha kala duwan ee gaadiidka iyo iibsashada sida DHL iyo Best Buy, ama IKEA lafteeda, ma iloobi doono McDonald's oo leh "M" midabkeedu yahay huruud iyo waxyaabo kale oo casaan ah.
Adigoon rabin oo aad rabto cagaar waa wax tilmaamaya gebi ahaanba dabiiciga, labadaba macaan, sida noocyada kala duwan ee cuntada. Carlsberg, oo ah biir, waa mid ka mid ah tusaalooyinka isticmaalka midabkan oo aan la iloobin GreenPeace midkoodna.
Midab qabow laakiin taasi waxay muujinaysaa degganaansho. Mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan shirkado kala duwan oo xambaarsan macnaha xirfad, daacadnimo iyo deggenaan, marka laga reebo labada la soo sheegay. Waxay sidoo kale la xiriirtaa guusha iyo maamulka. IBM, General Motors, HP ama BMW ayaa ah tusaalooyinka ugu caansan ee si dhakhso leh maskaxda ugu soo dhaca.
Midab madmadow leh oo muujin kara xigmad, sharaf, boqornimo iyo raaxo. Haddii aan eegno sawir gacmeedyada rinjiyeyaasha caadiga ah waxay had iyo jeer la xiriiraan dabaqadda sare ee bulshada.
Midabka casaanku waa dhedig, sida madadaalo waliba u noqon karto, in kastoo waxaa loo isticmaali karaa noocyo kale oo ujeeddooyin ah, inkasta oo aan tusaalaha la siin sidii Barbie.
Iyada oo macno leh miyi iyo ragannimo, bunni waxaa laga arki karaa astaanta UPS.
Midab leh laba-geesood, laga bilaabo xoog iyo xeel dheer ilaa mugdiga iyo dhimashada. Badanaa waxaa lagu arkaa tiro wanaagsan oo astaamo ah si calaamadda jeegga loogu saaro waxyaabo gaar ah oo ka mid ah.
Taas bedelkeeda, daahirnimo, nadaafad iyo fudeyd waxaa loogu talagalay caddaan. Had iyo jeer waa inay la socotaa mid kale si loogu soo bandhigo astaan ​​maadaama asalka uu bannaan yahay. Sida madow, shirkado badan ayaa badanaa leh laba nooc oo loogu talagalay asalka madow ama caddaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Awoodda midabka ee qaabeynta astaanta